Rasmi: Suldaan Mahesh Babu oo shaaca ka qaaday filimkiisa 26-aad macluumaad ku saabsan | Filimside
Home WARARKA MAANTA Rasmi: Suldaan Mahesh Babu oo shaaca ka qaaday filimkiisa 26-aad macluumaad ku...
Suldaan Mahesh Babu dhawaan waxaa guul lixaad leh u gaaray filimkiisii Maharshi oo ahaa midkiisa 25-aad ee uu hogaamiye ka yahay haatana Superstar-kan Koonfur Hindiya laga dambeeyo gaar ahaana shirkada Telugu ama Tollywood la shaqeeyo wuxuu shaaca ka qaaday filimkiisa 26-aad.
Mahesh ayaa ku dhawaaqay in filimkiisa 26-aad la dhaho Sarileru Neekevvaru wuxuuna kusoo aadiyay ku dhawaaqista mashruuciisa xili uu maamusayo dhalashada sanad guurada aabihiis Superstar Krishna oo 75-sano jirsaday sidoo kalena Koonfur Hindiya barisamaadkii awood weyn ku lahaa.
Mahesh filimkiisa Sarileru Neekevvaru waxaa la daawan doonaa todobaadka ugu horeeyo Janaayo 2020 ama feestada Sankranti 2020 waxaana Director ka ah Anil Ravipudi waana mashruuc weyn oo si dhaqsi ah shaqadiisa ku bilaaban doonto.
Mahesh Babu ayaa xili wacan bartanka kaga jiro madaama filimkiisii ugu dambeeyay Maharshi guul weyn gaaray wuxuuna dhigtay xaflad isaga iyo qoyskiisa si ay guushan ugu dabaal dagaan waxaana la hadal hayaa in filimkan asigoo Hindi ah Salman Khan sameyn doono madaama fariintiisa aad looga helay balse arinkan weli si rasmi ah shaaca loogama qaadin.
Previous articleLabo arin oo ka cusub Salman filimkiisa Bharat: Middii waa farxad midna waa murugo!
Next articleDaawo: Kanoute oo markale masjid ka dhisaayo Sevilla, Liverpool taageerayaashooda tacaalo ku dhacday, Wanda oo ubax nabadeed Inter u sido iyo qodobo kale oo xiiso badan nolosha cayaartooyda
Ahan Shetty iyo Tara Sutaria filimkooda Tadap oo dib u dhac...